ကညန နံပါတ်ပြား အသုံးပြုခြင်း မရှိသော ယာဉ်မောင်းများကို ယာ... | CarsDB
ကညန နံပါတ်ပြား အသုံးပြုခြင်း မရှိသော...
ကညန နံပါတ်ပြား အသုံးပြုခြင်း မရှိသော ယာဉ်မောင်းများကို ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်နှစ်ပိတ်မည်
စတေကာကပ် မောင်းနှင်နေသည့် မော်တော်ယာဉ်များနှင့် က.ည.န မှတရားဝင် ထုတ်ပေးထားသော ယာဉ်နံပါတ်ပြား တပ်ဆင် အသုံးပြုခြင်း မရှိဘဲ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသော နံပါတ်ပြားများ အသုံးပြုပြီး မောင်းနှင်သွားလာနေသော ယာဉ်မောင်းများကို ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် တစ်နှစ်ပိတ်သိမ်းသည်အထိ အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တပ်ဖွဲ့မှူးဖြစ်သူ ရဲမှူးကြီးကျော်ထွေးက ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
[caption id=attachment_387589 align=alignnone width=500] A worker polishesaFord during an event...A worker polishesaFord during an event by US carmaker Ford in Yangon on April 30, 2013. US carmaker Ford announced plans on April 30 to enter into the Myanmar market as sanctions have eased following democratic reforms in 2012. AFP PHOTO/ Soe Than WINSoe Than WIN/AFP/Getty Images[/caption]
စည်းကမ်းချိုးဖောက်သူများ အလွန်များပြားလာတဲ့အတွက် အခုလို အရေးယူရတာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အခု စီမံချက်ဒဏ်ငွေဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ မော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေအရ ဒဏ်ငွေ ကျပ်၁၅၀၀ ကနေ ၂၀၀၀ ထိပဲ ပေးဆောင်ရတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ယာဉ်မောင်းတွေ၊ ယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ စည်းကမ်းပိုင်းကို လိုက်နာမှု အားနည်းလာတယ်။ စည်းကမ်းဖောက် ပြီးတော့ ဒဏ်ငွေ ကျပ် ၁၅၀၀ ကို လွယ်လွယ် ကူကူပေးဆောင်လာကြတယ်။ ဒါကြောင့် စည်းကမ်းတွေ လိုက်နာဖို့ စတေကာကပ်ပြီး မောင်းတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေနဲ့ ကားနံပါတ်ကို ဒီဇိုင်းလုပ်ပြီး မောင်းနှင်နေတဲ့ ယာဉ်မောင်းတွေကို အနည်းဆုံး ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ခြောက်လကနေ တစ်နှစ်ထိ ပိတ်သိမ်းအရေးယူသွားမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
စတကောကပျ မောငျးနှငျနသေညျ့ မျောတျောယာဉျမြားနှငျ့ က.ည.န မှတရားဝငျ ထုတျပေးထားသော ယာဉျနံပါတျပွား တပျဆငျ အသုံးပွုခွငျး မရှိဘဲ မိမိအစီအစဉျဖွငျ့ ဖနျတီးထားသော နံပါတျပွားမြား အသုံးပွုပွီး မောငျးနှငျသှားလာနသေော ယာဉျမောငျးမြားကို ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ တဈနှဈပိတျသိမျးသညျအထိ အရေးယူသှားမညျ ဖွဈကွောငျး မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့ဌာနခြုပျ၊ ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးမှ တပျဖှဲ့မှူးဖွဈသူ ရဲမှူးကွီးကြျောထှေးက ဒီဇငျဘာ ၂၅ ရကျ နံနကျပိုငျးတှငျ ပွောကွားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
စညျးကမျးခြိုးဖောကျသူမြား အလှနျမြားပွားလာတဲ့အတှကျ အခုလို အရေးယူရတာ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ အခု စီမံခကျြဒဏျငှဆေိုတာ မရှိတော့ဘူး။ မျောတျောယာဉျ နညျးဥပဒအေရ ဒဏျငှေ ကပျြ၁၅ဝဝ ကနေ ၂ဝဝဝ ထိပဲ ပေးဆောငျရတယျ။ အဲ့ဒီတော့ ယာဉျမောငျးတှေ၊ ယာဉျပိုငျရှငျတှအေနနေဲ့ စညျးကမျးပိုငျးကို လိုကျနာမှု အားနညျးလာတယျ။ စညျးကမျးဖောကျ ပွီးတော့ ဒဏျငှေ ကပျြ ၁၅ဝဝ ကို လှယျလှယျ ကူကူပေးဆောငျလာကွတယျ။ ဒါကွောငျ့ စညျးကမျးတှေ လိုကျနာဖို့ စတကောကပျပွီး မောငျးတဲ့ ယာဉျမောငျးတှနေဲ့ ကားနံပါတျကို ဒီဇိုငျးလုပျပွီး မောငျးနှငျနတေဲ့ ယာဉျမောငျးတှကေို အနညျးဆုံး ယာဉျမောငျး လိုငျစငျခွောကျလကနေ တဈနှဈထိ ပိတျသိမျးအရေးယူသှားမယျလို့ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့ဌာနခြုပျ၊ ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးမှပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Posted at: 16-01-2014 06:19 AM